नवलपुरको कावासोतिमा जिल्ला स्तरीय दौड प्रतियोगिता सम्पन्न - Butwal Online
कावासोती, २५ साउन । नवलपुरको कावासोतिमा जिल्ला स्तरीय दौड प्रतियोगिता बुधबार सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा विनयी त्रिवेणी गाउपालिकाका मनिष गुरुङ्ग प्रथम भएका छन् । यसैगरि कावासोतीका रामबहादुर कार्की द्धितिय र गैडाकोटका अमृत बोट तृतीय भएका छन् ।
युवामञ्च नवलपुरको आयोजनामा भएको प्रतियोगिता उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाली काग्रेसका नेता बिष्णु कुमार कार्काी थिए । सो अबसरमा कार्कीले खेलकुद क्षेत्र प्रति युवाहरुले देखाएको चासोको प्रशंशा गरे ।
उनले यस्ता रचनात्मक क्रियाकलापलाइ आफुले सधै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा जिल्ला खेलकुद विकास समिति नवलपुरका अध्यक्ष विकास के.सी. बिषेष अतिथि थिए ।
सो प्रतियोगितामा १६ वर्ष देखी २८ वर्षसम्मका पुर्ण रुपमा स्वस्थ्य ५४ जना ब्याक्तीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कावासोतीको खुल्ला मैदानबाट दौड शुरु भई बिष्णुनगर हुदै , कालिका स्कुलबाट पुनः खुल्ला मैदानमा आएर समापन भएको थियो । करिव १० कि.मि. को दुरी सहभागीहरुले पार गरेका थिए ।
दौडमा प्रथम हुनेले नगद २० हजार , दोस्रो स्थान हासिल गर्नेले नगद १० हजार र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने ले नगद ५ हजार पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।
नवलपुर युवा मञ्चका अध्यक्ष मंगल लामाको अध्यक्षतामा उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको थियो । पछिल्लो समयमा युवाहरुमा खेलकुदप्रती चासो नदेखिएको र बिशेष गरि नवलपुरमा दौड प्रतियोगिताको आयोजना नभएको हुनाले नवलपुर युवा मञ्चले प्रतियोगिताको आयोजना गरेको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए ।